कोभिड–१९ : संक्रमितका लागि शिक्षा
भाद्र १२, २०७७ ०८:२४ मा प्रकाशित
के हो कोभिड–१९
कोभिड–१९ को मतलब ‘कोरोना भाइरस रोग २०१९’ हो । यो सार्स–कोभ–२ -SARS-Cov-2 नामक भाइरसका कारण हुन्छ । कोभिड–१९ भएका मानिसमा ज्वरो, खोकी, सास फेर्न गाह्रो हुने र अन्य विभिन्न लक्षणहरू देखा पर्छन् । सास फेर्न गाह्रो हुने समस्या चाहिँ जब संक्रमणले फोक्सोमा असर गरेपछि तथा निमोनिया भएपछि हुन्छ ।
कोभिड–१९ कसरी फैलन्छ ?
कोभिड–१९ निम्त्याउने भाइरस खासगरी व्यक्तिबाट व्यक्तिमा सर्दछ । जब संक्रमित व्यक्ति खोक्छ, हाछ्यूँ गर्छ, वा स्वस्थ व्यक्तिको नजिकै रहेर कुरा गर्छ भने यो सर्दछ । यो भाइरस सँगै बसेका व्यक्तिमा सजिलै सर्दछ । त्यस्तै मानिसको हुलमा, सँगै बसेर कुराकानी गर्दा, हात मिलाउँदा साथै अंकमाल गर्दा पनि यो भाइरस सर्दछ ।
कोभिड–१९ का लक्षणहरू केके हुन् ?
सामान्यतः व्यक्तिलाई संक्रमण भएको ४ वा ५ दिनपछि लक्षण देखा पर्छ । तर कतिपय व्यक्तिमा भने लक्षण देखा पर्न २ सातासम्म लाग्छ । कतिपय व्यक्तिमा भने लक्षण कहिल्यै देखा पर्दैन ।
व्यक्तिमा देखिने कोभिड–१९ का लक्षणहरू निम्नानुसार रहेका छन् :
अधिकांश लक्षण देखिएका व्यक्तिलाई केही साताभित्रै सञ्चो हुन्छ । तर कतिपय लक्षण देखा परेका व्यक्तिमा भने महिनौँसम्म पनि उस्तै रहने गर्छ । यो चाहिँ विशेषगरी पहिलेदेखि बिरामी भएका तथा अस्पताल भर्ना गर्नु परेका व्यक्तिमा हुन्छ ।
केटाकेटीमा कोभिड–१९ संक्रमण भएमा पाका व्यक्तिमा जस्तो गम्भीर लक्षण यिनीहरूमा कमै देखिन्छ ।
के म गम्भीर बिरामी हुने जोखिममा छु ?
यो तपाइँको उमेर स्वास्थ्यमा भर पर्छ । कतिपयमा कोभिड–१९ ले गम्भीर समस्याहरू निम्त्याउँछ । जस्तै : निमोनिया, पर्याप्त अक्सिजन नपाउने, मुटुको समस्या वा मृत्यु पनि हुन सक्छ । यो जोखिम वृद्ध उमेर समूहका व्यक्तिमा बढी देखिन्छ ।
प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुने व्यक्तिहरू एचआईभी संक्रमित भएका, पहिलो प्रकारको मधुमेह भएका, उच्च रक्तचाप भएका आदि हुन् ।
लक्षण भएमा मैले के गर्नुपर्छ ?
यदि तपाइँलाई कोभिड–१९ का लक्षणहरू– ज्वरो, खोकी, स्वास फेर्न गाह्रो हुने भएमा डाक्टर वा नर्सलाई भन्नुहोस् । तिनले तपाइँमा देखा परेको लक्षणबारे सोध्न सक्छन् । तपाइँको ट्राभल हिस्ट्रीका बारे पनि सोध्न सक्छन् साथै कोही संक्रमित बिरामीको सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो कि सोध्न सक्छन् ।
यसले स्वास्थ्यकर्मीलाई अन्य व्यक्तिमा सर्न नदिने उपाय अपनाउँदै तपाइँको हेरचाहमा तयारी गर्न सहयोग मिल्छ । यदि तपाइँ सघन उपचारको खाँचो भएमा एम्बुलेन्सलाई तुरुन्त बोलाउनुहोस् ।
के कोभिड–१९ गराउने भाइरसका लागि परीक्षणको व्यवस्था छ ?
छ । डाक्टर वा नर्सले तपाइँमा कोभिड–१९ भएको आशंका गरेमा उनीहरूले परीक्षणको लागि तपाइँको स्वाब संकलन गर्न सक्छन् । यदि तपाइँले खकारसहित खोकिरहनु भएको छ भने त्यसको पनि नमुना संकलन गरी परीक्षण गर्नेछन् । यी परीक्षणले चिकित्सकहरू तपाइँमा कोभिड–१९ छ वा अन्य कुनै रोग छ भन्ने कुराको निक्र्यौलमा पुग्नेछन् ।
कोभिड–१९ को उपचार कसरी हुन्छ ?
धेरै मानिस स्वास्थ्य स्थिति सुधार भएपछि घरमै रहन सक्छन् । तर गम्भीर लक्षण भएका वा अन्य स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्ति अस्पताल जानुपर्ने हुन सक्छ । हल्का बिरामी : हल्का वा सामान्य बिरामी भन्नाले तपाइँलाई ज्वरो र खोकी हुन सक्छ, तर स्वास लिन अप्ठ्यारो हुँदैन ।
के कोभिड–१९ रोकथाम गर्न सकिन्छ ?
कोभिड–१९ रोकथामका लागि अहिलेसम्म कुनै पनि खोप छैन । तर यसको फैलावट कम गर्न तपाइँ केही उपायहरू अपनाउन सक्नुहुन्छ । यी उपायहरू जो कोहीका लागि उपयुक्त छन् । विशेषगरी कोभिड–१९ का केसहरू बढी भएका क्षेत्रका मानिसलाई उपयोगी हुन्छ ।
कोभिड–१९ बाट आफू बच्न र अरूलाई बचाउन निम्न उपाय अपनाउन सकिन्छ :
– सामाजिक दूरी कायम गर्ने अभ्यास गर्नुहोस् । बिरामी भएका व्यक्तिबाट टाढा रहनु निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । तर सामाजिक दूरीको मतलब सबै व्यक्ति (जो तपाइँ बस्नुभएको घरमा बस्दैनन्) सँग दूरी कायम गर्नु हो । यसलाई शारीरिक दूरी पनि भनिन्छ ।
भीडमा नजानु सामाजिक दूरीको एक महत्वपूर्ण पाटो हो । तर साना जमघट पनि जोखिमपूर्ण हुन्छन् । त्यसैले जति सक्दो घरमै बस्नु राम्रो हुन्छ । जुनबेला तपाइँ बाहिर जानुहुन्छ, त्यसबेला हरेक व्यक्तिसँग कम्तिमा ६ फिट (करिब २ मिटर) को दूरी कायम गर्नुहोस् ।
– आवश्यकता छैन भने यात्रा नगर्नुहोस् । केही विज्ञहरूले कोभिड–१९ का संक्रमित पाइएका क्षेत्रतिर वा त्यहाँबाट कतै यात्रा नगर्न भनेका छन् । तर केही भीड, जस्तै विमानस्थलमा अलि लामो समय रहनु भएको छ भने संक्रमणको जोखिम बढी हुन्छ ।
यदि तपाइँ यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने गन्तव्य स्थानमा कोभिड–१९ का बारे कुनै नियम छन् कि यात्रा गर्नु पहिले जानकारी लिनुहोस् ।
सामाजिक दूरी किन यति धेरै महत्वपूर्ण छ त ?
भाइरस फैलिनबाट रोक्न एक अर्काबीच दूरी कायम गर्नु सबभन्दा राम्रो उपाय हो । यो किनभने भाइरस सजिलै सर्ने र कसलाई संक्रमण भएको छ भन्ने थाहा नहुने भएकाले महत्वपूर्ण छ । विभिन्न क्षेत्रमा फरक नियम हुन सक्छ । धेरैजसो स्थानहरू जस्तै; विद्यालय, डे केयर्स र बजारहरू बन्द छन्, साथै कार्यक्रमहरू रद्ध वा मिति सारिएको छ ।
विज्ञहरूले घरमै रहन सिफारिस गरिरहेका बेला यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आवश्यक छ । साथै निर्देशनहरूको पालना उचित पालना गर्न आवश्यक छ । यदि अन्य व्यक्तिसँग भेट्नैपर्ने छ भने निम्नानुसारका कुरा याद गर्नुहोस् :
– भाइरस भित्र र बाहिर जुनसुकै स्थानमा सर्न सक्छ । तर तुलनात्मक रूपमा बाहिर जोखिम कम हुन्छ ।
– जति धेरै मानिसलाई भेट्नुहुन्छ, त्यति धेरै भाइरस सर्न सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ ।
– पटक पटक हात धोइरहने, कम्तिमा ६ फिट (करिब २ मिटर) दूरी कायम गर्ने, र मास्क प्रयोग गर्नाले भाइरस सर्ने जोखिम कम गर्छ ।
यदि घरमा कसैलाई कोभिड–१९ भए मैले के गर्नुपर्छ ?
यदि कोही तपाइँको घरमा कोभिड–१९ संक्रमित भएमा आफू बच्न र अरूलाई बचाउन केही थप उपायहरू छन् :
– बिरामी भएको व्यक्तिलाई अरूबाट टाढा राख्नुहोस् : बिरामी व्यक्ति बेग्लै कोठामा बस्नुपर्छ र सम्भव भएसम्म छुट्टै सौचालयको व्यवस्था गर्नुपर्छ । उनीहरूले आफ्नै कोठामा खाना खानुपर्छ ।
विज्ञहरूले पनि घरपालुवा जनावरहरूबाट पनि निको नभएसम्म टाढा रहन भनेका छन् ।
– मास्क लगाउन दिनुहोस् : अन्य व्यक्तिहरू सँगसँगै एउटै कोठामा बस्दा कोभिड–१९ भएका बिरामीले कपडा वा सर्जिकल मास्क प्रयोग गर्नुपर्छ । यदि बिरामीले लगाएको छैन भने आफू बच्नका लागि तपाइँले मास्क लगाउनुहोस् ।
– सफा गरिरहनुहोस् : सफा गर्दा अपनाउनुपर्ने उपायहरू तपाइँलाई सहयोगसिद्ध हुन सक्छन् :
- सफा गर्दा पुनः प्रयोग गर्न नमिल्ने किसिमका पञ्जा प्रयोग गर्नुहोस् । बिरामी व्यक्तिको लुगाफाटो, खाने थाल भाँडा वा अन्य वस्तुहरू छुँदा पनि पञ्जाको प्रयोग गर्न उचित हुन्छ ।
-बिरामीले ओढ्ने लुगा सफा गर्दा राम्ररी धुनुहोस् । तपाइँको शरीरलाई लाग्न नदिनुहोस् । लुगा धोइसकेपछि लुगा धोएको मेसिन वा बाथरुम राम्ररी सफा गर्नुहोस् ।
-धेरै छोइरहने वस्तु नियमित सफा गर्नुहोस् । यसअन्तर्गत काउन्टर, ढोकाको चुकुल, टेबल, फोन वा मोबाइल, कम्प्युटर, बाथरुमको भागहरू आदि पर्दछन् ।
- घरका वस्तुहरू साबुन पानीले राम्ररी सफा गर्नुहोस् । त्यस्तै डिस्इन्फेक्सन गर्ने केमिकलको पनि सम्भव हुने स्थानमा प्रयोग गर्नुहोस् ।
संक्रमितसँग सम्पर्क भए के गर्ने ?
यदि तपाइँ कोभिड–१९ संक्रमितसँग भेट्नुभएको छ तर कुनै लक्षण देखिएको छैन भने घरमै कम्तिमा १४ दिन क्वारेन्टिन बस्नुपर्छ । यसको मतलब सम्भव भएसम्म घरमै रहने हो अनि घरमा रहेका अन्य सदस्यसँग कम्तिमा ६ फिटको दूरी कायम गर्नुहोस् ।
यदि गर्भवती भए के गर्ने ?
गर्भवती महिलामा कोभिड–१९ संक्रमण भएमा यसले सामान्य व्यक्तिभन्दा बढी गाह्रो पार्ने र आईसीयूमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था हुने एक अध्ययनले देखाएको छ । तर धेरैजसो व्यक्ति बच्चा हुनुभन्दा पहिले नै निको हुन्छन्, र अस्पतालमा रहनु पर्दैन । उही उमेर अन्य मानिसभन्दा गर्भवतीहरूको ज्यान जाने जोखिम पनि कम देखिएको छ ।
तनाव र डरको सामना गर्न म के गर्न सक्छु ?
कोभिड–१९ का सम्बन्धमा डर र चिन्ता हुनु सामान्य नै हो । यस्तै तपाइँको दैनिकी तथा साथीभाइ अनि आफन्त नदेख्दा तनाव वा एक्लो महसुस हुनु पनि सामान्य हो । तपाईँ निम्नानुसारका उपाय अपनाउँदै आफै आफ्नो ख्याल राख्न सक्नुहुन्छ ः
– नियमित समाचारहरूबाट टाढा रहनुहोस्,
– नियमित शारीरिक व्यायाम गर्नुहोस् र स्वस्थ खानेकुरा खानुहोस्,
– तपाइँलाई रमाइलो लाग्ने र घरमै गर्न मिल्ने क्रियाकलाप पत्ता लगाउनुहोस्,
– तपाइँका साथीभाइ तथा परिवारसँग सम्पर्कमा रहिरहनुहोस् ।